Sei Winter Train Travel muItaly kunotodiwa | Save A Train
musha > Travel Europe > Sei Winter Train Travel muItaly kunotodiwa
Zvitima ndiyo nzira yakanakisisa kuenda kuItaly pasinei mwaka. zvisinei, ivo kuva ngozi uye vasununguka nezvechisarudzo, kunyanya munguva yechando. Winter chitima kufamba muItaly ngozi chete, asi zviri zvakare kutsanya uye akarongeka.
Mukuru-nokukurumidza chitima mitsetse akadai Trenitalia run chaipo pasi nechepakati Italy. Trenitalia anonzi Frecciarossa, Frecciargento or Frecciabianca depending on the line. Trains link practically every town or city in Italy, kutora kuti nechepakati nomumwe kuenda. Huru Kumira vari Salerno - Napoli (Naples) - Roma (Rome) - Florence (Florence) - Bologna - Milan (Milan) - Torino (Turin). Rome kuna Venice chinhu kumeso 3 awa uye 45 yemaminitsi rwendo apo munhu okugumburisa kubva Florence kuRoma anongovawo 1 awa uye 32 maminitsi.
Nekuti kumhanyisa uye nyore zviri zvakakosha kuZima Chitima Kufamba muItaly, unogona kushanyira vose munyika pamusoro dzakasiyana nokukurumidza uye zvakanaka. Heano kumusoro maguta mashanu kuenda nechitima muItaly ichi chando.
1. Naples – ndiyo opener kwedu Winter Train Travel muItaly
Naples rakanakira vanoda kutiza nechando. Nguva dzose jeka muna Naples! Kana toreva Mhemberero Christmas, Naples anopenya pamusoro mamwe maguta ose kuItaly. Vane Christmas yechiberekerwa zvatinoona kuti achatora mweya wenyu. Uchaona vose pamusoro guta. Vazhinji vanobvumirana kuti yakanaka kwazvo munhu ari Via San Charo Armeno.
Rome kuna Tuscany chiri pamusoro nzira iri Winter Train Travel muItaly nokuti pfupi uye awa nehafu chitima tasva kure. Ungatanga zuva renyu Italy kuti guta kunakidzwa zororo rokutengesa uye kushanyira Vatican mamiziyamu. By zvemasikati, unogona kusvetukira chitima uye maawa asingasviki maviri, wana uri wakajeka Tuscany. Tora Dip ari chafariz mvura spas kuti chivharo kure zuva rako.
Milan kuna Siena Zvitima
Florence kuna Siena Zvitima
Perugia kuna Siena Zvitima
Rome kuna Siena Zvitima
Kana ukaona yechando mugwenga uye ruvengo kutonhora mamiriro okunze; ipapo kudzidzisa akaenderei Palermo. Sisiri ndiye kupunyuka wenyu chilli kuchamhembe Europe sezvo yarinopa ezvinhu kuti anonzwa pedyo chirimo kana chitubu. Newewo unogona kuona asi kuwira murudo Christmas misika veguta, yechiberekerwa zvatinoona, uye Ages mudano.
Kutadzisa kuchamhembe kuguta nokuTurin kana kuchitonhora Skiing uchapukunyuka ndiyo pfungwa yenyu chando mafaro. Turin hwenyu Winter Train Travel muItaly suo kuna Alps. Regai kurasikirwa Luci d'Artista. Ndicho wegore wepanguva unyanzvi ratidza rinotivhenekera guta yevedza chiedza zvivako.
Winter muna Venice kunoreva wakachena, Crisp mhepo uye vashoma mapoka kuti kutsausa imi kubva runako kwayo. Nakidzwa negondola kukwira kana kunwa kofi pa mraba. Pane nguva mukana chiedza rakanaya chando kuti wako Venice ruzivo kunyanya mashiripiti.
Sei Buy Tickets kuti Winter Train Travel muItaly
Kutenga matikiti pachine kunoita hwako zvishoma anoshungurudza. For Akareba nezvitima akadai Frecciarossa, Frecciargento, frecciabianca, reserved seating is mandatory.
Kutenga tikiti ari munhu pachiteshi anogara nezvechisarudzo. zvisinei, kugadzirira mitsetse refu uye kuzvuzvungudza, uye yepamusoro mitengo. In nhasi uye zera, zvakanyorwa kuva ndozvakajairwa kuchengetera yenyu chitima zvigaro paIndaneti. Kana totaura sei kure pachine unogona kutenga matikiti dzenyu, mhinduro achaenderana mhando Italian chitima.
Frecce zvitima zviri soro-nokukurumidza nezvitima kuti run pakati maguta makuru Italy raMwari. Unogona kutenga matikiti wako mangwanani sezvo mwedzi mina pamberi penyu pakufamba musi. Recently, Trenitalia yakazivisa kuti kwaizowedzera yayo Réservation jengachenga kuti 6 mwedzi mberi.
Book zvigaro zvenyu pachine, uye imi muchava kunyange zvimwe zvinokosha discounts. Zviri zvakanakisisa kutenga matikiti yenyu kana iwe uri chokwadi ako misi kufamba sezvo discounted uye mberi matikiti vari yemanyorero vasiri unochinja uye non-refundable. Contact Save A Train chero mibvunzo iri chando nechitima kufamba muItaly.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine batanidzo kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwinter-train-travel-italy%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#traveleurope europeantravel europetravel longtrainjourneys mazano trainjourney Tranride nezvitima traintip chitima mazano Train Travel chitima kufamba Mazano chitima rwendo famba travelitaly